Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Barnaamijyada Maalgelinta Mulkiilaha|Barnaamijka Yaraynta Mulkiilaha
Sharciga Yaraynta Mulkiilaha Gobolka Washington (RCW 43.31.605) wuxuu dhaqan galay 7dii Juunyo 2018 si mulkiilayaasha loo siiyo dhiirigelin iyo in lagu daro ammaan si ay ula shaqeeyaan kiraystayaasha qaata kaalmada kirada. Barnaamijku wuxuu siiyaa mulkiilaha ilaa $ 1,000 magdhow ahaan xoogaa casriyayn ah oo loo baahan yahay u guuritaan, ilaa afar iyo toban maalmood oo kirada la waayi karo iyo illaa $ 5,000 oo ah u qalmitaannada u qalma ee kireystuhu u geysto inta lagu jiro kiraysiga.
Read Su'aalaha Badiya La Weydiiyo ku saabsan barnaamijka wixii macluumaad dheeraad ah.
Mulkiile kasta oo baaray, ansixiyay oo siiyay guryo kiro ah codsade kasta oo isticmaali doona nooc kasta oo ka mid ah barnaamijka kabista guryaha ayaa xaq u leh, marka laga reebo guryaha ay maamulaan hay'adaha guryaha.
Sida Loogu Qalmo Barnaamijka Yaraynta Mulkiilaha
Ganacsigu wuu ansixin doonaa oo bixin doonaa sheegashooyinka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Si kastaba ha noqotee, ku guuldareysiga bixinta dukumiinti sax ah si loo qanciyo shuruudaha hoose waxay sababi kartaa sheegashooyin la diido. Fadlan diyaari dukumiintiyada soo socda si aad u baarto una soo gudbiso dalab dalab ah. Ma sii wadi doonno dukumiinti. Haddii aynaan helin dhammaan dukumiintiyada loo baahan yahay iyo wixii kale oo caddayn ah oo taageeraya, sheegashada waa la diidi doonaa waxayna u baahan doontaa in dib loo soo gudbiyo iyadoo la dhigayo sheegashada hoose ee safka. Rafcaanada sababo kale oo kasta ayaa la ogolaan karaa oo keliya haddii xukun laga gaaro khasaaraha.
Qoraal muhiim ah: Dib-u-socod kasta oo sheegasho ah ayaa ka mamnuuci doonta mulkiilaha (ama hay'ad kasta oo wakiil ka ah milkiilaha guriga) inay raacdo tallaabo sharci ah oo loogu talagalay lacagaha dheeraadka ah ee laga leeyahay kireystaha waqti kasta oo mustaqbalka ah.
Dib u eegis dhameystiran oo sharciga ah, fadlan booqo RCW 43.31.605.
Dukumiintiyada looga baahan yahay waxyeelada iyo / ama sheegashada kirada:
1) Hel Washington Lambarka Aqoonsiga Iibiyaha Gobolka oo dhan.
2) Heshiis kiro qoran oo la fuliyay oo u dhexeeya kireeyaha iyo kiraysteyaasha.
3) Heshiiska Caawinta Kirada (ama caddeyn ku filan ee kaalmada guryaha).
4) Warbixinta Kormeerka Kaalmada Kireynta ee laga helo barnaamijka kabista.
5) Dhameystiray Warbixinta Xaaladda Guuritaanka (kani ma aha Warbixinta Kormeerka Kireynta Kireynta) oo ay wada saxeexeen oo ay taariikhaysan yihiin Mulkiileyaasha iyo Kiraysteyaasha (yaasha) labadaba.
6) Buug Kireyste oo muujinaya qayb kasta oo aan la bixin ee kirada iyo kharashyada kale ee la sheeganayo iyo codsashada Debaajiga Amniga (haddii dib-u-guurid ka dib).
7) Ogeysiisyada la xiriira eedeymaha aan la bixin.
8) Sawirada burburka iyo sawirrada aagga ay dhibaatadu saameysey dayactirka ka dib.10) Nuqulada dhammaan qaansheegta dayactirka ee waxyeelada ku jirta sheegashada.
9) Dhamaystir dhan foomka soo gudbinta dalabka.
10) Akhriso Su'aalaha Badiya La Weydiiyo ku saabsan barnaamijka wixii macluumaad dheeraad ah.
Xiriirinta Sanduuqa Yaraynta Mulkiilaha
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo (shabakad)
Xeerka Oggolaanaya: RCW 43.31.605
Sharciga Shaacinta Dadweynaha, Cutubka 42.56
Warbixinta Xaaladda Guuritaanka / Dibedda (PDF)
Xaashida Macluumaadka Yaraynta (PDF)
Soo Bandhigida Tababarka Yaraynta (PDF)